जब सारा अली खानलाई भिकारी सम्झेर मान्छेले पैसा दिएका थिए... :: Setopati
जब सारा अली खानलाई भिकारी सम्झेर मान्छेले पैसा दिएका थिए...
एजेन्सी मुम्बई, मंसिर ५
सानैदेखि बलिउड अभिनेत्री सारा अली खानको रूचि कलातिर बढी रह्यो। यसै विषयमा सारा बेलाबेलामा पुराना तस्वीरहरू सामाजिक संजालमार्फत पोष्ट पनि गर्छिन्।
साराले हालै एक अन्तर्वार्तामा आफ्नो बाल्यकालमा भएको रोचक घटना सुनाएकी हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ।
हिन्दुस्तान टाइम्सलाई साराले बताएअनुसार उनी बाल्यवस्थामा सारा नाच्न खुबै मन पराउँथिन्। यही क्रममा एकपटक परिवारसँग बिदा मनाउन विदेश गएकी थिइन्। बुवा सैफ अली खान, आमा अमृता सिंह र भाइ इब्राहिम अली खान पनि साथै थिए।
घुम्ने क्रममा एकदिन सारा र इब्राहिमलाई बाहिरै छाडेर सैफ र अमृता सामान किन्न पसल छिरेका थिए।
'उहाँहरू पसल छिर्नु भएपछि म र भाइ हाम्रो सहयोगीसँग बाहिर थियौं। हामी तीन जना बाहिर कुरिरहेका थियौं। म यसै त्यहीँ नाच्न थालेँ,' साराले अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्, 'म नाच्न थालेपछि त्यहाँ बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू रोकिएर मेरो नाच हेर्न थाले। अनि पछि पैसा दिए।'
उनले थप भनेकी छन्, 'मलाई थाहा थियो उनीहरूले मलाई भिकारी सोचेर पैसा दिएका हुन्। तर पैसा पाइयो भन्दै म चाहिँ अझ बढी रमाउँदै नाच्न थालेकी थिएँ।'
सारालाई त्यसबखत उनका सहयोगीले पनि नाच्न रोकेका थिएनन्।
पछि सैफ र अमृता पसलबाट बाहिर निस्कना साथ सहयोगी गर्वका साथ उनीहरूसामु पुगेको साराले बताएकी छन्। उनले भनेछन्, 'मान्छेहरूलाई सारा प्यारी लागेछ। उनीहरूले पैसा दिए।'
यो सुन्नासाथ अमृता एकछिन चकित परिन्। त्यसपछि सहयोगीलाई भनिन्, 'प्यारी लागेर होइन, सारालाई भिकारी सोचेर पैसा दिइरहेका छन्।'
यो बाल्यकालको घटना साराले दंग पर्दै सुनाएकी हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ।
फिल्म 'केदारनाथ'बाट बलिउडमा प्रवेश गरेकी सारा 'लभ आज कल' र 'सिम्बा'मा देखिइसकेकी छन्। त्यस्तै उनको अभिनय रहेको फिल्म 'कुल्ली नं १' रिलिज तयारीमा छ। डेविड धवनद्वारा निर्देशित यो फिल्म यही डिसेम्बर २५ मा अमेजन प्राइमबाट सार्वजनिक हुने भनिएको छ। यसमा वरूण धवनको पनि मुख्य भूमिका छ।
यसबाहेक सारा आनन्द एल राईको 'अत्रंगी रे'मा पनि देखा पर्ने भएकी छन्। पर्दामा उनी अक्षय कुमार र धनुषसँग देखा पर्ने हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ५, २०७७, १६:३१:००
हास्य कलाकार भारती र उनका श्रीमानलाई जमानतमा छाड्न अनुमति
पतिसहित भारतीलाई १३ दिनको न्यायिक हिरासतमा पठाइयो
लागू औषध मामिलामा कसरी पक्राउ परिन् भारती?
यो दिन आउनेछ प्रभास र सैफ अली खानको 'आदिपुरुष' (हेर्नुस् ट्रेलर)
इमरान खानले छाडे बलिउड!
यस्ती भइन् 'बजरंगी भाइजान'की मुन्नी